चुनावको मुखमा देउवा र ओलीले पार्टीको लक्षका बारेमा मुख खोले, कांग्रेसले बहुमत र एमालेले दुई तिहाई जित्ने दावि, के भन्छ गुप्तचरको रिपोर्ट ? - EAAWAJ (इ-आवाज)
चुनावको मुखमा देउवा र ओलीले पार्टीको लक्षका बारेमा मुख खोले, कांग्रेसले बहुमत र एमालेले दुई तिहाई जित्ने दावि, के भन्छ गुप्तचरको रिपोर्ट ?
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको महासंग्राम सकिनै लाग्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आ-आफ्ना लक्षबारे मुख खोलेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टी बहुमतको नजिक पुग्ने दाबी गरेका छन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीले बाम गठबन्धन दुई तिहाइको नजिक पुग्ने दाबी गरेका छन् । दुबै दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी सरकार आफ्नै दलको नेतृत्वमा बन्ने दाबी समेत गरेका छन् ।
देउवाको दावि : सकभर बहुमत, नभए ठूलो दल
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीले ‘सकभर बहुमत ल्याउने’ बताएका छन् । बहुमत आएन भने पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेमा आफू ढुक्क भएको देउवाले लक्ष सार्वजनिक गरेका छन् । ठूलो पार्टी बन्ने पक्कापक्की भएको दाबी गरेका देउवाले निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलका रुपमा बस्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका लागि पत्रकार विजयकुमारलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘म ढुक्क छु, नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ ।’ त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनेमा म ढुक्क छु । सकभर कांग्रेसको बहुमत आउँछ भन्ने लागेको छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ बाम गठबन्धन दुई तिहाईको नजिक पुग्ने दाबी गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकलाई नै दिएको अन्तरवार्तामा ओलीले भनेका छन्,‘दुई तिहाईको आसपास । तर, बहुमतमा चाहिँ कुनै शंका छैन । आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नै छैन ।’ चुनावपछि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने ओलीले दाबी गरेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचनअगावै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार पारेको एक रिपोर्टमा भने एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कांग्रेस दोस्रो दल बन्ने गुप्तचरको रिपोर्टमा उल्लेख छ । गुप्तचरको रिपोर्टमा एमालेले प्रत्यक्षमा ५० देखि ७० सीट जित्ने र समानुपातिकमा ३१ देखि ४१ सीटसम्म जित्न सक्ने देखाइएको छ । यसका आधार जोड्दा एमालेले कुल ८१ सीटदेखि १ सय ११ सीटको बिचमा परिणाम ल्याउने गुप्तचरको रिपोर्ट छ ।
त्यसैगरी कांग्रेसले प्रत्यक्षमा एमालेको भन्दा १० सिट कम ल्याउने गुप्तचरको आँकलन छ । समानुपातिकमा भने कांग्रेसले एमालेभन्दा १ सिटमात्रै कम ल्याउने आँकलन गरिएको छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसले जित्ने कुल सिट ७० देखि १ सयसम्म हुन सक्ने गुप्तचरको विश्लेषण छ । रिपोर्टमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३०/३५ सीटको हाराहारीमा जित्ने र समानुपातिक समेत जोड्दा करिब ५०/६० सीट पुग्ने देखाइएको छ ।
एमाले र माओवादीको कुल सिट जोड्दा बहुमत (१३८ सीट) सहजै कट्ने गुप्तचरको रिपोर्ट छ । त्यसो त अनुसन्धान विभागले यो रिपोर्ट तयार पार्दा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबीच पार्टी एकता भएकै थिएन । तर, रिपोर्टमा लोकतान्त्रिक फोरमले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी बढीमा ८ र घटीमा ३ सीट जित्ने देखाइएको छ, जसलाई जोड्दा पनि एमालेको भन्दा बढी हुँदैन । र, यस आधारमा पनि एमाले नै ठूलो दल हुने गुप्तचरको रिपोर्टको निश्कर्ष छ ।
रिपोर्टमा राजपा र फोरमले कुल २३ सिटको हाराहारीमा जित्ने अनुमान गरिएको छ । कमल थापाको पार्टी राप्रपाको स्थिति भने राप्रपा प्रजातान्त्रिकको भन्दा कमजोर हुने दाबी गरिएको छ ।
← लिभरपुलद्वारा ब्राइटन ५–१ ले पराजित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा एफबीआईको कडा आलोचना →